Imishini yeplastikhi efrinta imishini
Kusukela yasungulwa ngo-2002
Umshanelo we-Plastic filament extruding machine
Umshini we-plastic brush intambo extruding
Intambo yePulasitiki yentambo yokukhipha umshini
Umshini we-Plastic synthetic hair filament extruding
Umshini wePulasitiki owenziwe ngentambo eyelash intambo
Umshini wepulasitiki we-plastic cosmetic brush extruding
Umshini wepulasitiki wokuxubha intambo yamazinyo
Umshini wepulasitiki wepulasitiki wentambo yokukhipha umshini
Ukuphepha kwe-Plastic intambo extruding umshini
Plastic ukudoba intambo extruding umshini
Umshini wePulasitiki weNayiloni extruding
Umshini we-Plastic PET wire extruding
Ikhasimende & Isentha isithombe
Ukuhlolwa kwe-PET High ukulingisa izinwele zomuntu zokwenziwa kwezinwele zomugqa womshini
NgoJuni.04th 2021, sihlola ngempumelelo umugqa ophelele wezinwele ze-fiber fiber ulayini ngempumelelo. Lo mugqa womshini owenziwe nge-PET owenziwe ngokwezifiso uhambelana nomthamo wokukhiqiza kabili ngezindleko eziphansi. Kusukela ekuhlanganisweni kwempahla eluhlaza kuze kube sekupheleni kuqedile i-PET mbumbulu wezinwele, iklayenti lethu liyaneliseka nge-t ...
Ukulethwa kwe-PET umshanelo nxazonke umugqa womshini we-monofilament
ngomphathi ku 21-05-22
NgoMeyi 22nd, 2021, sihlela ukulethwa komugqa omusha womshini omusha we-PET womugqa womshini we-monofilament wamakhasimende. Iba yinto ethandwa kakhulu ngenxa yezinzuzo zayo. Ama-flakes e-PET ayi-100% asetshenzisiwe kabusha, umugqa wokusebenza okulula, izindleko zokukhiqiza eziphansi njll kwenza umugqa wethu womshini wamukelwe amaklayenti avela ekubala okuningi ...
Ukuhlaziywa kokuthuthukiswa kwemakethe komshini wokudweba we-plastic monofilament
Ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, izinga lokuzenzakalela komshini wokudweba intambo yepulasitiki luthuthukiswa kancane kancane. Kusukela kubasebenzi abathathu abedlule kuya ekusebenzeni kwamanje, kudinga kuphela isisebenzi esisodwa esizosebenza. Ingasebenza ngaphandle kwabafundi abanamakhono nolwazi olusebenzayo ...
Ukuhlolwa komugqa womshini omusha we-PET umshanelo wentambo yomshini weklayenti laseSri Lanka
Ngo-Ephreli.26,2021, siqedile ukuhlolwa komugqa ophelele we-PET umshanelo wokuxubha intambo yeklayenti lethu laseSri Lanka. Lo mugqa womshini uthathe izinsuku ezingama-50 kusuka ekuqinisekisweni kwe-oda ukuwahlola ngokwesivumelwano sethu. Kusukela omiswe impahla eluhlaza kuya intambo emazombezombe, kuhhavini Samandla, intambo ahlabayo kanye w ...
Inetha lokuphepha lepulasitiki
Inetha lokuphepha liyinetha lokuvikela elibekwe ngaphansi noma ohlangothini lwalo ngesikhathi kufakwa imishini yokwakha ephezulu noma okwenziwa kwezobuciko ukuvikela izingozi ezidalwa ngabantu noma izinto eziwayo. Inetha lokuphepha lakhiwa ngumzimba wenetha, izintambo eziseceleni, ama-tether namathenda. Umzimba wenetha ulukiwe ...
Ukuhlolwa komugqa wentambo yePlastiki PET
Intambo yePlastiki ye-PET ikhiqizwa ngamabhodlela amabhodlela e-PET avuselelwe kabusha ayi-100%, ngakho-ke izindleko zokukhiqiza zishibhile kakhulu. Intambo ye-PET yamukelwa ngemakethe futhi kungaba esikhundleni sezinhlobo eziningi zezintambo zepulasitiki ezifana ne-PP, PE, PA njll. NgoMashi 27, 2021, inkampani yethu yahlola umugqa omusha ophelele wokukhiqiza intambo we-PET ...
Ukuthunyelwa kwentambo ye-PBT yezimonyo / ukuthunyelwa kwefayibha ngoMashi 10, 2021
NgoMashi 10, 2021, sahlela ukuthunyelwa kolayini wokukhiqiza ibhulashi we-PBT wezimonyo weklayenti lethu laseNdiya. Ingqikithi yeziqukathi ezintathu ezidingekayo kulayini ophelele wokukhiqiza. I-Plastic PBT PET yezimonyo ibhulashi intambo extruding umshini umugqa ukukhiqiza ikhwalithi ephezulu monofilament ezosetshenziswa t ...
Isimo semakethe sepulasitiki esenziwe kabusha
Ekupheleni kweholide loMkhosi Wentwasahlobo, kunezindaba ezimnandi njalo emkhakheni wokurisayikilisha. Imboni iqala kabusha ukusebenza nokukhiqiza, futhi inethemba ngombono wemakethe. Kulindeleke ukuthi imakethe ye-PE eyenziwe kabusha izonyuka cishe nge-100-200 yuan / ton esikhathini esizayo. Sithemba isimo ...
Ukulethwa komshini wentambo eyenziwe ngokwezifiso ye-PET
NgoMar.06th, 2021, sahlela ukuthunyelwa kwamakhasimende ethu aseMorocco ngomugqa ophelele wokukhiqiza intambo ye-PET / ibhulashi. Lokhu kungukuthunyelwa kokuqala ngemuva kweholide lethu lonyaka omusha. Lo ngumugqa ophelele wokukhiqiza intambo ye-PET / ibhulashi, owenziwe ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende. I-PET ...
Yini okufanele uyinake lapho usebenzisa i-extruder
Ngesikhathi sokusetshenziswa okujwayelekile kwe-plastic extruder, kufanele unake ukuthi amathuluzi ayo asesimweni esibekiwe yini. Ngoba lolu hlobo lomshini lunezidingo eziphakeme zephethini yokusetshenziswa nemvelo, kufanele usebenze ngokuya ngemithetho, hhayi ukusetshenziswa komuntu ngamunye, futhi ugweme irandi ...
Umkhosi Wezibani waseChina wango-2021
Ugujwa ngosuku lwesi-15 lwenyanga yokuqala yenyanga yamaShayina, uMkhosi Wezibani ngokwesiko umaka ukuphela kwesikhathi sonyaka omusha waseChina (Umkhosi Wentwasahlobo). KungoLwesihlanu, ngoFebhuwari 26 ngo-2021. I-Qingdao Zhuoya Machinery Co., Ltd ifisela bonke abangane ukujabulela i-Lantern Festival nemindeni! Abantu ...
Umkhuba wokuthuthuka we-plastic extruder awunakugwenywa
Phakathi kwazo zonke izinhlobo zemishini yepulasitiki, umnyombo yi-extruder yepulasitiki, eye yaba ngomunye wamamodeli asetshenziswa kakhulu embonini yokucubungula ipulasitiki. I-Plastic extruder yakhiwe ngohlelo lwe-extrusion, uhlelo lokudlulisa nokushisa nokupholisa uhlelo. Ngokusho kwenani lezikulufo, it ca ...
I-Qingdao Zhuoya Machinery Co., Ltd.yinkampani enolwazi olunzulu ngesayensi nobuchwepheshe ehlanganiswe nocwaningo nentuthuko, amanga, ukuthengisa kanye nensizakalo